० दुई पार्टीबीचका जनसंगठन र मातहत कमिटीहरु एकिकरण हुन किन ढिलाई भएको हो ?
पहिलो कुरा त दुइवटा ठुला पार्टीको एकताको प्रक्रिया स्वभाविक रुपमा जटिल नै हो । त्यससंगै प्रधानमन्त्रीज्यु पार्टीको अध्यक्ष पनि हुुनुहुन्छ । उहाँसंग स्वभाविक रुपमा समयको चाप हुने रहेछ । सरकार सञ्चालनमा नै उहाँको अध्याधिक समय लगानी हुन्छ । अहिले फेरी प्रतिपक्षले चौतर्फी घेराबन्दी गरेको अवस्था छ । त्यसकारण त्यतापनि समय दिनुपर्दा दुईवटा अध्यक्षले पर्याप्त छलफलका लागि समय नपाउनु भएको हुनसक्छ । बैठकहरु बस्न पनि समयका कारण वातावरण तयार भै नहाल्ने गर्दा अलि समस्या भएको हो ।
० संयुक्त वामको चुनावी घोषणापत्र अनुसार सरकार गठन भएको ६ महिना भइसक्दा पनि आशालाग्दो ढंगले एउटै काम हुन सकेन भन्ने गुनासो छ नी ?
अहिले मुख्यत तीन तहको संरचनाको राम्रो तालमेल मिलिसकेको छैन । संरचना नै बनिराखेको छैन । त्यो प्रक्रियामै छ । त्यसले गर्दा स्वभाविक रुपमा नियम कानुनहरु पनि संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने छ । र, कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट पनि बाँकी नै छ । यि सबै कारणले गर्दा पनि स्वभाविक रुपमा एउटा जटिलता हुने नै भयो । अर्को कुरा फेरी काँग्रेसले सञ्चालन गर्दा अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक पक्षहरु हावी हुन गयो । त्यसको असर पनि अहिले सरकारका काम कारवाहीहरुमा परिराखेको छ । मलाई लाग्छ, अब यो केही समय पछि हुन्छ । अहिले भर्खर त छ महिना भयो । अब सरकारले नयाँ ढंगले समिक्षा गरेर अहिलेसम्मका अनुभवहरुको समिक्षा गर्दै नयाँ शिराबाट पहलकदमी लिन्छ र जनताले जे अपेक्षा गरेका छन्, त्यो अपेक्षा पुरा हुन्छ ।
० तर ६ महिना भइसक्दा पनि हरेक मन्त्रीहरु हल्लाखल्ला र मिडीयाबाजी गर्ने, जनतालाई राहत हुने गरी ठोस काम नगर्ने र विवादास्पद निर्णयहरु गर्दै हिँडेको हुँदा यहाँ त बेलगाम जस्तो भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ नी ?
मुख्यकुरा पार्टीले सरकार सञ्चालनमा जुन भूमिका खेल्नुपथ्र्यो त्यो भइराखेको छैन । एकिकरणका कामहरु नै द्रुत गतिमा हुन सकेका छैनन् । यदी त्यस्तो हुन्थ्यो भने हरेक मन्त्रालयमा सरकार सञ्चालनको एउटा टिम बनाएर जिम्मा दिने हो भने र टिम खडा गरेर काम गर्ने हो भने धेरै काम अगाडि बढ्न सक्छ । अहिले कार्यविभाजन नै भइराखेको छैन । सरकारको काममा पार्टीको तर्फबाट जति सहयोग हुन पर्ने हो, त्यो नभएकै हो । तल पनि संरचना बनिसकेको छैन । सरकारका कामलाई समर्थन गर्ने अथवा सहयोग गर्ने खालका वातावरण बनिराखेको छैन । माथिदेखि तलसम्म बन्ने संरचनागत प्रक्रिया टुङ्गिएपछि सरकारका कामहरु प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्छ र पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरु ठोस जिम्मामा जान्छन् । त्यो पुरा हुँदा सरकारका कामहरु प्रभावकारी भएको अनुभुत हुन्छ ।
० पार्टीले स्थायी समितिमा सरकारको अहिले सम्मको काम कारवाही बारेमा मात्रै अलग्गै छलफल गरी निर्मम समिक्षा गर्ने भन्ने कुरा पनि सर्दै गइरहेको छ । सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा किन ट्युनीङ नमिलेको होला ?
हाम्रो अहिलेको आवश्यकता नयाँ हो । नयाँ संविधान बनेको, नयाँ सन्दर्भ अनि तिन तहको सरकार छ । तर हाम्रा अभ्यासहरु पुरानै छ । हाम्रा पुराना बानी बेहोरा, चाल चलन, आदतहरु जुन छन्, त्यसले गर्दा त्यसलाई चिर्न हामीलाई गाह्रो छ । किनभने आवश्यकता नयाँ छ । जनताको अपेक्षा नयाँ छ । नया चिज नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन पर्ने आवश्यकता छ । तर हाम्रो अनुभवहरु पुरानै छन् । मलाई लाग्छ, त्यसको एउटा तालमेल मिलीराखेको छैन । हिजो देखिको जो विरासत छ, त्यसलाई क्रम गर्ने कुरामा अलिकति एकतावद्ध हुन जरुरी छ । त्यसको अभावमा अहिले पार्टी कमिटीहरु पनि परिचालीत भइराखेको छैनन् । त्यसले गर्दा त्यो स्थिति पैदा भएको हो । मलाई लाग्छ पार्टीका संरचनाहरु खडा भइसकेपछि र एउटा नीति, योजना र कार्यक्रम बनेर ठोस रुपमा अगाडि जाँदा यो धेरै समस्याहरु हल गर्छ भन्ने लाग्छ ।
० अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु र केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्रीबीच तालमेल नमिलेका कुराहरु बाहिर आए, प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटघाट गर्न समय नदिएको कुरा बाहिर आयो, यसले भर्खरै आएको संघियतामै समस्या हुने हो की भन्ने आशंकाहरु पनि बढेको छ नी ?
नयाँ कामहरु जो सरकार सञ्चालनमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि राम्रो गृहकार्य पनि हामीले गर्न जरुरी छ । पार्टीभित्र पनि यसबारेमा छलफल भइराखेको छैन । फेरी प्रदेश सरकारहरुमाथी पनि दवाव छ । स्थानीय निकायहरुसंग उनीहरुको सम्वन्धको कुरा पनि छ । त्यसले गर्दा केही जटिलताहरु आउनु त स्वभाविकै हो । नयँ प्रक्रियामा नयाँ काममा हामी जाँदैथियौं । नयाँ परिवेशमा हामी जाँदैथ्यौं । त्यसकारण नयाँ काममा जाँदा केही जटिलताहरु आउने र कयौं समस्याहरु तुरुन्तै हल नहुने हुन सक्छ । सिक्न पनि हामीलाई केही समय लाग्छ । ३ तहको संस्थागत संरचनाको समन्वय गर्नुप¥यो । त्यसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो पुरा गर्न पनि हामीलाई केही सिक्न त समय लाग्छ नै ।
० पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले केही मन्त्रीहरु फेरबदलको सुचिमा छन्् भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले होइन भन्नुभयो, अनि फेरी भारतबाट फर्किएपछि प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो त्यही हो यथार्थता भन्नुभयो, यस्ता कुराहरुबाट शिर्ष नेताबीच दुरी बढेको हो की भन्ने आशंका देखिएको छ नी ?
प्रधानमन्त्री जो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा ढाडस दिएको कुरा पनि हो त्यो । तपाँइ अगाडि बढ्नुस् मन्त्रीहरुका काम कारवाह्ी प्रभावकारी भएनन् भने हामी हस्तक्षेप गर्न तयार छौं भनेर एउटा आड दिएको कुरा हो । अर्कोतर्फ मन्त्रीहरुलाई पनि आफ्नो कामतर्फ प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि सजग गराएको विषय पनि हो ।
० खासगरी गृहमन्त्रीको कायैशैलिको धेरै आलोचनाहरु आयो, लेनिन विष्ट विमानस्थलबाट रोकिएको, कुलपति बालुवाटार ल्याइएको र चिकित्सक पक्राउ गरेर सिधै गृह मन्त्रालय ल्याइएको प्रसंगहरु छन्, त्यसबाहेक खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड तथा नेकपा नेताहरुलाई पनि त्यस्तै गरिएको छ ?
गृहमन्त्री पनि नयाँ अनुभव सहित हुनुहुन्छ । सुरक्षा मामला र गृह मन्त्रालय अलि जटिल पनि छ । नेपालको संवेदनशिल सुरक्षा निकायहरु परिचालन गर्नुपर्छ । फेरी दुनियाभरीका षड्यन्त्रहरु पनि भइराखेका छन् असफल गराउनका लागि । त्यो जटिलताको बीचाम पनि हुनुहुन्छ उहाँ । कतिपय कुराहरु पर्याप्त छलफल नभएर पनि समस्या भएको हुनसक्छ । यसमा ठोसमा भन्नुपर्दा त्यस्तो विवाद, वहशको रुपमा र जुन रुपमा मिडीयाहरुमा आएको छ, त्यस्तो यर्थाथता होइन । केही न केही वहस छलफल त हुने नै भए । अलग अलग जिम्मेवारी भइसकेपछि त्यसमा जिम्मेवारीको सन्दर्भमा थोरै टिका टिप्पणी त हुने नै भयो । तर जुन ढंगले मिडीयामा आएको छ त्यस्तो त होइन ।
० प्रधानमन्त्रीले आफुलाई असफल पार्ने हिसावले नै कतै यि कामहरु त भइरहेको छैन भनेर संशयको हिसावले हेरेको भन्ने पनि सुनिएको छ ?
त्यो सोच्नुपनि हुन्न । बेकार हो । त्यो त विरोधीहरुले हौवा फैलाउने कुरा हो ।
० संसदीय समितिको सभापति चयन प्रकृयामा चाहिँ के कारणले ढिलाई भइरहेको छ ?
करिव करिव समितिहरुको टुङ्गो लागिसक्यो । सभापति अर्थात कुन समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा मिलाउन पनि खासै बाँकी छैन । अब त्यसमा प्रक्रियाामा जान मात्र बाँकी हो ।
० ठुलो पार्टी र पर्याप्त नेताहरु भएकाले विवादको घेरामा आएका मन्त्रीहरुलाई पदमै राखेर सरकारलाई थप अलोकप्रिय रबनाइराख्नुपर्ने केही वाध्यता छ र ?
विवादको घेरामा बाहिर मिडीयामा आएको हल्ला हो । यर्थाथमा कुन मन्त्रीको काम के आधारमा प्रभावकारी भएन , उहाँहरुलाई सच्चिने मौका पनि दिनुप¥यो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै उहाँहरुसंग पर्याप्त छलफल गर्ने समय मिलीराखेके छैन ।
० तर प्रधानमन्त्रीका वरिपरीका सल्लाहकारहरुले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच भेटघाट समेत गर्न नदिएर दुरी बढाइदिइसकेको भन्ने गुनासो छ ?
त्यस्तो म देख्दिन । दुरी खडा गरेको होइन भन्ने होइन बरु हाम्रो शैलि, तरिका अलि फरक छ । काम गर्ने तरिकामा पार्टीको नियन्त्रण, पकड र निर्देशन त्यती छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि पर्याप्त समय दिन पाइरहनु भएको छैन । उहाँहरुको पनि विभिन्न कामहरुमा व्यस्त भइहनुपर्ने समस्या छ । त्यसले गर्दा पर्याप्त छलफल र वहश नहुँदा पार्टी भित्र पनि सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका बीचमा पनि अलग अलग छलफल हुनुपर्ने, टिममा छलफल हुनुपर्ने । त्यो कुराको पनि कमि भइरहेको छ । मलाई लाग्छ समयके चापले गर्दा त्यस्तो भएको हो । पार्टीका कामहरु एउटा ढंगले सेटअप भइसकेपछि तहहरु बनिसकेपछि मलाई लाग्छ प्रधानमनत्रीले पनि अलिकति समय पाउनुहुन्छ । त्यो बेला उहाँले यस्ता विषयमा छलफल वहस अगाडि बढाएर पार्टीभित्र पनि र मन्त्रीहरुलाई पनि बोलाएर व्यवस्थित गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ ।
० यो कायैशैलिबाट जनता आशावादी हुने ठाँउ छ त ?
सरकारको सन्दर्भमा अहिले खासगरी काँग्रेसले जे जटिलताहरु खडा गरिदिएर उ सरकारभन्दा बाहिर छ, ति सबैलाई पनि सम्हालेर लानुपर्ने अहिलेको सरकारको आवश्यकता हो । अर्को कुरा संरचनागत रुपमा ३ तहको कायैविभाजन, कार्यालयहरुको व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवस्था लगायत कामहरु पनि भइरहेको छैन । त्यसले गर्दा यो जटिलता आएको हो भनेर आम जनताले पनि बुझिदिनुप¥यो । छ महिना मा जादुजस्तो हुने कुरा त भएन । सरकारको कामको सन्दर्भमा आँउदा पार्टीभित्र र बाहिर पनि पर्याप्त छलफल हुने, सरकारमा पनि पर्याप्त छलफल हुने अवस्था बन्नुपर्छ । त्यो अवस्था छिट्टै आँउछ । त्यतीन्जेल विस्वस्त रहन म जनतालाई अग्रह गर्छु ।